Dib u eegista Maareynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi | 2022
Bogga ugu weyn Dib u eegista Maareynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi | 2022
Ma ogtahay in ka qayb qaadashada maamulka hantida shakhsi ahaaneed ee Citi ay tahay dariiq hubaal ah oo lagu heli karo xoriyada hodanka ah?
Maqaalkan, waxaad ku baran doontaa sida maamulka hantida shakhsi ahaaneed ee Citi u shaqeeyo iyo sida aad u heli karto aqoonta.
Waa maxay maamulka hantida shakhsi ahaaneed ee Citi?
Citi Personal Wealth Management waa waaxda la-talinta maaliyadeed ee Citi (la-hawlgalayaasha xayaysiinta ee SmartAsset), shirkad adeegyo maaliyadeed oo caalami ah iyo bangi. Waa qayb ka mid ah Citigroup Global Markets Inc., oo lafteeda ah shirkad hoos timaada Citigroup Inc., oo ah shirkad si guud loo hayo. Shirkaddu waxay ku salaysan tahay New York waxayna leedahay shabakad ballaaran oo xirfadlayaal qorsheyn maaliyadeed ah, oo ay ku jiraan kumanaan lataliye maaliyadeed.
Macaamiisha Citi Personal Wealth Management inta badan waa macaamiisha Citigroup Global Markets Inc., dilaal-deeqle. Inta badan macaamiisha shirkadu waa shakhsiyaad aan qiimo lahayn, laakiin sidoo kale waxay si weyn ula shaqeysaa shaqsiyaadka sarifka ku fadhiya.
Waxa kale oo ay u adeegtaa maal-gashadayaasha hay'adaha oo ay ku jiraan qorshayaasha hawlgabka iyo faa'iidada wadaagga, ururada samafalka, hay'adaha dawladda, xisaabaadka kalsoonida dejinta iyo shirkadaha.
Asalkii hore ee Maareynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi
Citi Personal Wealth Management waa qayb hoos timaada Citibank. Citi asal ahaan waxaa la aasaasay 1812, laakiin Citi Personal Wealth Management waxay jirtay kaliya ilaa 1964.
Citi waxa ay ku jirtaa kaalinta 33aad ee 2021 Fortune 500, waxayna leedahay in ka badan boqollaal kun oo shaqaale ah adduunka oo dhan. Citi waxay ka shaqeysaa dhinacyo badan oo adeegyo maaliyadeed ah, oo ay ku jiraan bangiyada maalgashiga.
Khidmadaha hoos yimaada Maaraynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi
Citi Personal Wealth Management kuma dalaco wax khidmad ah oo dheeri ah adeegyadeeda qorsheynta maaliyadeed, kuwaas oo ay heli karaan oo kaliya macaamiisha Citigroup Global Markets Inc.
Citi sidoo kale kama hesho magdhow dhinacyada saddexaad ee la xidhiidha diyaarinta qorshayaasha maaliyadeed. Qorshayaasha maaliyadeed waxaa lagu bixiyaa isku darka mushaharka, magdhowga dhiirigelinta iyo suurtogalka ah gunno ku meel gaar ah.
Isticmaalka Citi Personal Wealth Management si ay u maalgashato waxa ay xanbaarsan tahay khidmadaha kala duwan, oo ku salaysan doorashada akoontiga ee la doortay. Qiimaha khidmadaha xisaabaadkani waa kuwan hoos:
Xisaabaadka Sinaanta, Dheelitiran iyo Qaababka Badan
Hantida Maamulaysa Qiimaha Kharashka
$500,000 ugu horeyso 2.00%
Ku xiga $500,000 1.50%
Ku xiga $2,000,000 1.25%
Ka sarreeya $ 3,000,000 1.00%
Xisaabaadka Dakhliga go'an
$500,000 ugu horeyso 1.00%
Ku xiga $500,000 0.90%
Ku xiga $2,000,000 0.75%
Ka sarreeya $ 3,000,000 0.60%
Ma rabtaa inaad ka yaabto sida ay Citi ujrada maaraynta maalgashiga isu urursanayaan? Jadwalka hoose wuxuu qeexayaa sida Jadwalka khidmadda xisaabta ee Citi sinaanta, dheelitirnaanta iyo qaababka badan ay u tarjumeyso dollarka dhabta ah. Ogsoonow in qiyaasahani ay ku saleysan yihiin qiimaha khidmadda ugu badan ee suurtagalka ah.
Khidmadaha Maareynta ee la qiyaasay ee Maareynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi*
Hantidaada Sinaanta Maareynta Hantida Shakhsiyeed ee Citi, Isku dheelitiran iyo Kharashyada Qaababka Badan
$ 500K $ 10,000
$ 1MM $ 17,500
$ 5MM $ 62,500
$ 10MM $ 112,500
*Khidmadaha maamulka ee la qiyaasay kuma jiraan dillaalnimada, haynta, maareeyaha qolo saddexaad ama kharashyo kale, kuwaas oo kala duwanaan kara cadad ahaan.
Sideen Si Dhakhso Ah Ugu Soo Dejiyaa Xisaabtayda Citi?
Degdega Windows (2013-2015) Tilmaamaha
Tag Qalabka> Liiska Xisaabaadka oo dhagsii Edit ee ku xiga akoonkaaga Citibank.
Tabaha Adeegyada Khadka Tooska ah, waxaa laga yaabaa inaad haysato ikhtiyaaro kala duwan, taasoo ku xidhan nooca Quicken:…
Wax kala beddelashadaada hadda waxay ka soo dejisan doontaa Citibank mar kasta oo aad ku socodsiiso Cusbooneysii Hal Tallaabo ee Quicken.
Goorta Lagu Wareejinayo Citi Account Personal
Ku haysashada faylalkaaga maalgelinta aasaasiga ah si buuxda loo maalgeliyo muddada fog waa mid ka mid ah talooyinka ugu muhiimsan ee aan samayno.
Laakiin waxaan sidoo kale aqoonsannahay in laga yaabo inaad haysato baahiyo dareere ah waqti ka waqti, ha ahaato mid la qorsheeyay ama mid aan la qorshayn.
Halkii aad iibin lahayd wax maalgashi ah oo jira si aad u daboosho baahiyahaas, waxa laga yaabaa in aad ka fikirto in aad gasho amaahda maalgelinta ee margin and securities supported (MSBF)
Iyada oo $25.3 bilyan oo dareere ah la bixiyo si caalami ah, barnaamijkeena MSBF waxa uu awood u leeyahay amaahashada heerar tartan ah iyada oo la adeegsanayo hanti maaliyadeed oo ballaadhan oo dammaanad ah.
Kuwaas waxaa ka mid ah lacag caddaan ah iyo lacag caddaan ah oo u dhiganta, sinnaanta iyo curaarta, saamiyada REIT ee lagu kala beddelo, maalgelinta wadaagga ah iyo ETF-yada, qoraallada habaysan ee Citi-qaybin, iyo maalgelinta hedge.
Sida Loo Saxeexo Maaraynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi
Citi Personal Wealth Management waxay ku siinaysaa marin online ah oo aad ku gasho akoonnadaada maalgashiga, habeen iyo maalin, todobada maalmood ee todobaadka.
Citi waxay laamo ku leedahay dalka oo dhan. Waxaad isticmaali kartaa Citi's website si aad u hesho laan ku leh la-taliyayaal maaliyadeed oo jooga goobta ka dibna wac si aad ballan ula sameysato lataliye.
Maamulka hantida shakhsi ahaaneed ee Citi sida loo helo foomka canshuurta 1099 onlayn
Hagahaan dhamaystiran oo xogwarran waa qalab lagu caawinayo diyaarinta canshuur celinta. Waxay ka kooban tahay tusaaleyaal, sharraxaadyo iyo sawirro Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS).
Helitaanka Tusaha Cashuurta
Guji xiriirkan si aad u hesho macluumaadka ku saabsan Turbo Tax.
Hel Macluumaadka Canshuurta Turbo
Guji xiriirkan si aad u hesho macluumaadka ku saabsan H&R Block.
Gal H&R Block
Qalabka Maalgelinta Labada Dhinac
Si ay kuugu habboonaato, qalabkani waxa uu ku siinayaa macluumaadka ku saabsan boqolleyda dakhliga cashuur-dhaafka ah ee dakhliga dawladda hoose ee gobolka iyo boqolkiiba dakhliga ka soo gala hay'adda dawladda, toos ah dawladda dhexe iyo ilo shisheeye oo loogu talagalay fund gaar ah.
Helitaanka Qalabka Sanduuqa Wadajirka ah
Sideen lacag ugu shubaa akoonkayga Citibank?
Si aad lacag ugu shubto akoonkaaga, waxaad u baahan tahay inaad buuxiso Foomka Deposit Tooska ah, kaas oo laga heli karo laan kasta oo Citibank ah, ama ka soo qaado shaqo-bixiyahaaga.
Bixi lambarkaaga koontada iyo lambarka Citibank ABA ee koontada aad rabto in lagu shubo dhigaalka, ama ku lifaaq jeeg maqan. Marka jeegga la dhigo, lacagta isla markiiba waa laguu heli karaa.
Ma jiraa app loogu talagalay Maareynta Maalka Shakhsi ahaaneed ee Citi?
Ka ganacsatid meel kasta Citi Mobile App. Meel kasta oo aad tagto, Citi Mobile App-ka waxa uu ku siinayaa awood aad ku ganacsato oo ku xidho dhammaan macluumaadka akoonkaaga.
Waa maxay Citigold Home Connect?
"Citigold Home Connect" waa adeeg ka dhigaya mid aad u fudud oo ku habboon macaamiisheeda hodanka ah, marka ay u safrayaan dibadda, inay galaan 24/7 bangiga telefoonka adigoo garaacaya nambar soo jiidasho leh oo qiimahiisu yahay wicitaanka deegaanka.
Sida loo galo Citibank IRA?
Sida bangiyada IRAs u shaqeeyaan
Fur Dhaqameed ama Roth IRA xisaabta.
Tallaabada 1: Dooro alaabtaada. IRA oo leh Citibank, waxaad ka dooran kartaa laba nooc oo akoonnada deebaajiga ah: Xisaabaadka Suuqa Lacagta Caymiska ama Shahaadooyinka Deposit (CDs). …
Tallaabada 2: Dooro nooca IRA-gaaga. …
Tallaabada 3: Bilow maalgelinta akoonkaaga.
Adeegyada ay bixiso Citi Personal Wealth Management
Adeegyada kala duwan waxaa bixiya Citi Personal Wealth Management. Waxaa ka mid ah:
Qalabka qorshaynta maaliyadeed
Xarunta waxbarashada maaliyadda
Barnaamijyada la-talinta maalgashiga, oo ay ku jiraan barnaamijyada hantida badan
Falsafada Maalgelinta Maalgelinta Maareynta Maalgelinta Shakhsi ahaaneed ee Citi
Guud ahaan, dhinaca la-talinta maaliyadeed ee Citi Personal Wealth Management waxay diiradda saartaa abuurista astaan ​​maaliyadeed oo shakhsi ah oo dhamaystiran mid kasta oo ka mid ah macaamiisheeda. Xog-ururintan waxa ku jira macluumaadka ku saabsan hantida macmiilka, deymaha, dakhliga iyo kharashyada, heerka cashuurta iyo ujeedooyinka, iyo sidoo kale qorshayaasha kale ee mustaqbalka fog sida bixinta waxbarashada iyo isu diyaarinta hawlgabka. Waxa kale oo ay tixgelisaa baahiyaha caymiska iyo baahiyaha qorshaynta guryaha.
Macaamiisha hela qorshe maaliyadeed waxay markaas u isticmaali karaan Citigroup Global Markets, Inc. dilaaliil ahaan si ay u fuliyaan qorshaha uu dejiyay lataliyahooda Maareynta Maaliyadeed ee Citi Personal. Marka la eego xeeladaha maalgelinta, dhowr ikhtiyaar ayaa la heli karaa, iyadoo mid kastaa diiradda saarayo meelo gaar ah oo suuqa ka mid ah, waqtiga fog ama dulqaadka khatarta ah.
Maxaa Laga Fiirsadaa
Citigroup Global Suuqyada Inc., oo ah shirkadda waalidka ee Citi Personal Wealth Management, waxay haysaa tiro bandhigyo ah oo ku saabsan rikoorkeeda 10kii sano ee la soo dhaafay. Sida ku cad dukumentiyada SEC, shirkadu waxay leedahay siidaynta la xidhiidha kuwan soo socda:
Qirashada dembiga ama aan la tartamin dembi
Lagu soo oogay dambi
Lagu soo oogay fal-dambiyeed
Ku xadgudubka SEC ama CFTC qawaaniinta ama qawaaniinta
Haysashada amar ay geliyeen SEC ama CFTC ee hawlaha maalgashiga la xidhiidha
Lahaanshaha ganaax lacageed madaniga ah ama joojinta iyo ka joogsiga SEC ama CFTC
In lagu helo wakaalad sharciyeed inay samaysay hadal been abuur ah ama wax ka dhaafis ah ama inay ahayd daacadnimo, cadaalad daro ama anshax xumo.
In lagu helo xadgudub ku ah xeerarka maalgashiga
Haysashada amar la soo galiyay oo la xidhiidha hawlaha maalgashiga
Haysashada hay'ad sharciyeed in ay diido, hakiso ama la noqoto diiwaan gelinta ama shatiga
Haysashada bandhigyo kala duwan oo la xiriira urur iskiis isu maamula, oo ay ku jiraan inuu sameeyay hadal been abuur ah ama ka tegis
Talooyin ku saabsan Qorshaynta Maaliyadda
Dhib malaha lataliyaha aad la shaqeyso, la imaanshaha qorshe maaliyadeed waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatiijiyadaada. Hubi inaad si sax ah u ogtahay yoolalkaagu waxay yihiin si qorshahaaga maaliyadeed uu u noqdo mid faahfaahsan intii suurtogal ah.
Markaad ka fekereyso mustaqbalkaaga dhaqaale, waa muhiim inaad ogaato sida aad u taageeri doonto naftaada ka dib markaad ka fariisato shaqada. Qayb ka mid ah dakhligaaga hawlgabku waxay u badan tahay inuu ka yimaado Lambarka Bulshada. Waxaad isticmaali kartaa xisaabiyaha badbaadada bulshada ee SmartAsset si aad u aragto inta uu le'eg yahay dakhliga Lambarka Bulshada ee aad heli doonto marka aad gaadho sannadahaaga dahabiga ah.
Citi Personal Wealth Management waa waaxda la-talinta maaliyadeed ee Citi (la-hawlgalayaasha xayaysiinta ee SmartAsset), shirkad adeegyo maaliyadeed oo caalami ah iyo bangi.
Waa maxay bangiga gaarka ah ee Citi?
Citi Private Bank, oo ah qayb ka mid ah shirkadaha bangiyada caalamiga ah ee Citigroup, suuqyada Adeegyada bangiyada gaarka ah ee macaamiisha gaarka ah ee aadka u sarreeya, oo ay ku jiraan ganacsatada iyo madaxda sare ee shirkadaha.
Markaad akhrido maqaalkan, waxaad arki kartaa sida ay faa'iido kuugu yeelan karto haddii aad raacdo qorshe maalgashi hanti oo sax ah sida kan Citi Bank.
Bangiyada ugu Fiican UK ee Maalgashiga
Bangiyada Maalgashiga ee ugu Fiican Australia
Waa Maxay Bangiga Maalgashigu Sideese U Shaqeeyaa?
Xisaabaadka Bangiga ugu Wanaagsan ee Dhallinta leh Dulsaarka Badan
Citi AAdvantage MileUp App Review
Waa maxay Ultra High Net Worth? 10ka Shakhsiyaadka ugu Sareeya ee Istaahila
Sida Loo Bilaabo Ganacsiga Gaadiidleyda 2022 | Hagaha Buuxa
Faallooyinka Royal Seas Cruises 2022: Sidee bay u Shaqaysaa | Xalaal Mise Fadeexad?
Waxay ahayd sanad dheer waxaadna ku fikiraysaa inaad fasax la qaadato qoyskaaga. Kadib, waxaad helaysaa…
Dib -u -eegista Scanguard: Ma Xalaalbaa mise Antivirus kale oo Spammy ah?
Scanguard wuxuu sheeganayaa inuu hagaajiyo khaladaadka caadiga ah ee kombuyuutarka, ka ilaaliyo luminta faylka, malware, hardware failure, iyo hagaajinta PC…
Cilmi baaris ayaa muujisay in wicitaanada fiidiyowgu ay noqdeen arrin maalinle ah oo ka mid ah isgaarsiinta maanta iyadoo in ka badan 175% ay kordheen…
Faallooyinka Prizerebel 2022: Khiyaano kale oo Sahamin Online ah?
Dhawr bilood ka hor, waxaan si quus ah u dhex wareegayay shabakada anigoo raadinaya habab aan ku heli karo…
Faallooyinka Gohenry 2021: Sharci ama Fadeexad, Sida ay U Shaqeyso
Carruurtu waxay qarash gareeyaan lacag iyaga oo aan haysan maskax wax kaydsan oo aadan la socon sida ay u kharash gareeyaan…
15 Buugga Mahatma Gandhi ee ugu Fiican | 2021 Liiska
Maqaalkani waxa uu taxayaa buugaagta ugu wanaagsan ee uu qoray Mahatma Gandh. Waxay noqon doontaa maqaal kooban oo sax ah, joog…
10 Goobood oo Lagu Iibsado Kaarka Hadiyada Online Iyadoo la hubinayo Account